'Imuli kaMnangagwa Kayekele Ukufakela Amapholisa Incindezi Kudaba Lwegolide Elabophisa uRushwaya'
Lwezi 02, 2020
Amapholisa lohulumende sebethule umbiko belandula ukuthi igolide elabotshelwa uHenrietta Rushwaya ngelomkaMongameli welizwe uNkosikazi Auxillia Mnangagwa lendodana yakhe uCollins.
URushwaya ubotshwe ngeviki edluleyo ezama ukuphuma elizweni ngudlu le6kg zegolide elibiza US$333,000 engelamaphepha afaneleyo njalo engalibhadalelanga umthelo.
Kubotshwe njalo abanye abayisithupha abagoqela abacupi, amaCIO, lamapholisa besetheswa icala lokusebenza loRushwaya.
Omunye wabasolwa uMnu Gift Karanda nguye owaveza ukuthi igolide leli lalingelikaNkosikazi Mnangagwa loCollins, yena oseke waqanjwa kumisebenzi yenkohlakalo ethinta inkampani yeDrax International lanxa nje ekulandula lokhu.
UNkosikazi Mnangagwa wethule owakhe umbiko ekuseni izolo ewaphika amazwi kaKaranda njalo esipha amapholisa ingqobe ukuthi aphumele egcekeni atsho ukuthi alobufakazo na obukhomba ukuthi igolide leli ngelakhe kumbe hatshi.
Isikhulumeli samapholisa uMnu Paul Nyathi uphange wethule umbiko esithi uKaranda uqambe amanga ngokuthi igolide leli ngelikaNkosikazi Mnangagwa loCollins.
Isikhulumeli sikahulumende uMnu Nick Mangwana laye wethula owakhe umbiko esithi uKaranda ujonge nje ukungcolisa igala lomndeni kaMnangagwa.
Imbiko kahulumende leyamapholisa le yamukelwe ngemibono ehlukeneyo nguzulu labamabandla ezombusazwe.
Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnu Felix Magaleli Mafa Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi imuli kaMnangagwa kumele yekele amapholisa aphenye loludaba engelakwesaba ukuze kuphume iqiniso eligcweleyo.
Ingxoxo loMnu Felix Magalela Mafa
Kodwa ilunga leZanu PF uMnu Believe Gaule uthi kusobala ukuthi kulezitha ezizama ukungcolisa igama lemuli kaMongameli Mnangagwa.
Khepha ingcwethi kwezombusazwe uMnu Effie Dlela Ncube ugcizelele amazwi kaMafa awokuthi akuqondaba ukuthi imuli kaMnangagwa itshutshise amapholisa ukuthi ayigeze kuloludaba.